Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka | Informationsverige.se
Halkan waxaa ku jirta warbixin loogu talogalay adigaaga magan-galyo ka raadsaday Iswiidhan.
Halkan waxaa ku jira macluumaad loogu talogalay adigaaga helay sharci deganaansho.
Halkan waxaa ku jirta warbixin loogu talogalay adiga ah qof yimi Iswiidhan iyadoo aan waalid la socon oo ka yar 18 sanno.
Hanuuninta bulshada waxaa loogu talogalay adigaaga doonaya inaad dheeraad ka ogaato wixii ku saabsan Iswiidhan iyo bulshada Iswiidhishka.
Calanka Yuukrayn oo saaran bir calan oo cirka oo buluug ah ka dambeeyo.
Ku socota adigaaga ka yimi Yuukrayn
Halkan waxaa ku qoran warbixin ku saabsan xeerka qaxootiga badan iyo waxa ku khuseeya adigaaga ka soo qaxay dagaalka ka jira Yuukrayn.
Laba haween ah oo hadlaya, mid weliba waxay haysataa moobil telafoonkeeda oo waxay si xiiso leh u eegayaan shaashada.
Ma dooneysaa in aad baratid af-Swiidhish?
Dhul leh duur, biyo, guryo iyo calanka Iswiidhan.
Maadooyinka cilmiga bulshada waa waxbarasho bilaash ah kuna saabsan bulshada iswiidhan looguna talogalay adigaaga dhawaan helay sharciga deganaansho ee Iswiidhan. ”Ku saabsan Iswiidhan” waxaa ku jira hanuuninta bulshada looguna talogalay adigaaga doonaya inaad dheeraad ka ogaato wixii ku saabsan Iswiidhan iyo bulshada Iswiidhishka.
Nin gacanta ku haya wiil yar, labadooduba way wada qoslayaan.
Halkan waxaad adigaaga Swiidhan ku ah waalid cusub ka heli kartaa macluumaad ku aaddan waalidnimada iyo halka aad la xiriiri kartid hadba xaaladaha kala duwan ee canuggaaga khuseeya.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa sida aad u helayso shaqooyinka banaan, bilaabida shirkad gaar ah iyo qawaaniinta dhinaca suuqa shaqada.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa wixi ku saabsan dhaqaale, in la bixiyo canshuur iyo noocyada kaalmo ee kala duwan. Waxaad xitaa ka helaysaa warbixin ku saabsan sida aad u samaysanayso xisaab bangi iyo heshiisyada shirkadaha, xisaab bixinta iyo deynnka.